Ngamunye kagesi ezizungezile ensimini kagesi. Ngenxa eside izazi zesayensi ucwaningo sesiluqedile ukuthi kube khona ukusebenzisana phakathi emizimbeni icala kungenxa Amasimu kagesi eziwazungezile. Ziwuhlobo olukhethekile ndaba, okuyinto kuhlangene ngokungenakuhlukaniswa zonke kagesi.
Isifundo yasendle kagesi Kwenziwa ngokwethula kuwo umzimba esihle icala. Lemigwamanda zibizwa ngokuthi "amacala test". Ngokwesibonelo, njengoba ngokuvamile sisetshenziswa test icala icala kukakhokho ibhola.
Lapho enza icala isivivinyo inkambu kagesi komzimba, okuyinto has a icala omuhle, kulula kahle icala pith ibhola ushukunyiswa yiwo ngeke hlanhlatha kulapho, siyosondelana uwulethe umzimba.
Lapho ihamba, ubhekene necala isivivinyo inkambu kagesi yanoma yimuphi umzimba icala kalula ukuthola ukuthi amandla siphile ngokuvumelana nalo, kuzohluka ezindaweni ezahlukene.
Ngokwesibonelo, lapho ibekwe ku ewuchungechunge okufanayo ensimini iphuzu ezahlukene ukuhlolwa obujwayelekile amacala omuhle Q1, Q2, Q3, ..., umbz, ungase uthole ukuthi amabutho ngokuvumelana nayo, F1, F2, F3, ..., FN zihlukile, kodwa isilinganiso amandla usayizi icala elithile le nsimu ukhomba njalo:
F1 / Q1 = F2 / Q2 = F3 / Q3 = ... = FN / umbz.
Uma ngale ndlela ngeke ukuhlola amaphuzu ezahlukene emkhakheni, sithola esiphethweni elandelayo: ngayinye iphuzu ngabanye emkhakheni kagesi isilinganiso amandla wayenethonya ngecala yokuhlola Yimbi kangakanani le mali futhi njalo kungakhathaliseki ukubaluleka isivivinyo kwenkokhelo.
Kule kusobala ukuthi ukubaluleka kwalesi isilinganiso ephawula emkhakheni kagesi kunoma yiziphi amaphuzu ayo. Inani okuyinto kukalwa isilinganiso amandla wayenethonya ngecala omuhle ibekwe ngaleso sikhathi zasendle, ubungako kanye kwenkokhiso amandla kagesi nsimu:
Kuyinto, njengoba kusobala nenchazelo, elilingana nebutho okuyinto ethatha kwi iyunithi ngokushaja omuhle walubeka iphuzu elithile yasendle.
Iyunithi ukushuba ensimini kagesi ekutholeni umfutho ensimini ayisukumele ubukhulu ophethe eyodwa nge amandla electrostatic elilodwa dyne. Le yunithi ubizwa ngokuthi eliphelele iyunithi electrostatic ukungezwani.
Ukuze sithole kagesi emkhakheni ukushuba iyiphi q iphuzu icala iphuzu ngokungenasizathu emkhakheni A ukumangalelwa kwethu ngokuthi uyashiywa ke ngumuntu R1 ibanga, lokhu kufanele ibekwe ku-iphuzu ngokungenasizathu test icala Q1 futhi abale amandla Fa, okuyinto ethatha ku umkhiqizo (cleaner).
Ngokusho ukuthi umthetho Coulomb sika :
Uma sithatha isilinganiso zamabutho ezithinta ukukhokha enanini layo Q1, kungenzeka ukubala emkhakheni kagesi ukungezwani iphoyinti A:
Ungase futhi ngithola amandla ongumashiqela iphuzu B; kuyoba ulingana:
Ngakho-ke, lo kagesi emkhakheni ukushuba njengoba ibhekene namacala iphuzu ngesikhathi iphuzu elithile zasendle (e vacuo) ukuba ithunzi elehlayo usayizi icala inhlukanozigaba kuya skwele ibanga phakathi leli phuzu kanti icala.
Amandla ensimini ukhonza njengomdala amandla libe nezici. Ukwazi ke nganoma yingasiphi emkhakheni E, kulula ukubala ibuye F, esebenza kwi q icala iphuzu enikeziwe:
I kagesi emkhakheni - vector ubuningi. Direction ukungezwani iphuzu ngalinye ethize emkhakheni is kuhlangene isiqondiso amandla wayenethonya ngecala omuhle afakwe iphuzu.
Ngo ukwakheka ensimini amacala eziningana: Q1 futhi Q2 - amandla E nganoma yingasiphi A mkhakha kuyoba ilingana nenani lezinombolo Jomethri ye E1 futhi E2 ukungezwani wadala weyesi inikezwe eceleni uyala Q1 futhi Q2.
Inkambu kagesi nganoma yingasiphi ingaboniswa imidwebo ngumuntu ingxenye wayala ukuba evela leli phuzu, ngendlela efanayo amandla isithombe nezinye izinto eziningi-vector.
Antitussives. Khetha okungcono.